« Dakar court »: nomena sehatra ny sarimihetsika malagasy | NewsMada
« Dakar court »: nomena sehatra ny sarimihetsika malagasy
Fanao isan-taona any Dakar, Renivohitr’i Sénegal, ity hetsika “Dakar court” ity. Tsy diso anjara tamin’izany ny sarimihetsika malagasy.
Nandritra ny fanokafana ny talata teo, anisan’ny nahazo tombondahiny ny sarimihetsika malagasy tamin’ny alalan’i Manohiray Randriamananjo sy ny sarimihetsika fohy nampitondrainy ny lohateny hoe “Afropower”. Teo koa ny an’i Rianando Ludovic, mitondra ny lohateny “Le petit bonhomme de riz” ary farany ny an’i Herizo Ramiliarijaonina, nampitondrainy ny lohateny “Ray”. Maro ireo nanatrika ity fotoana ity, indrindra ireo mpikirakira sarimihetsika maneran-tany. Anisan’izany i Laza Razanajatovo, talen’ny Rencontres du film courts de Madagascar. “Fantatro fa sarotra dia sarotra ny mikarakara hetsika tahaka izao, indrindra ny hahazoana mitazona izany mandritra ny fotoana maharitra. Sarotra ihany koa ny ahazoana mifehy sy mampitohy hetsika tahaka izao ho an’ny firenena 54 aty Afrika”, hoy izy.
Araka izany, heverina fa isan’ny manana ny maha izy azy aty Afrika ny sarimihetsika malagasy matoa nahazo tombony manokana manoloana ireo sarimihetsika hafa manerana an’i Afrika. Anisan’ny mpiray ombon’antoka sy niara-nikarakara ity hetsika “Dakar court” ity ny Institut français de Dakar sy ny Cinemarekk izay fivondronana mpilalao sarimihetsika sy mpikirakira sarimihetsika maromaro ao Sénégal sy manerana an’i Afrika.
Ankoatra izay, nisy koa hetsika hafa nifanindran-dalana tamin’ity “Dakar court” ity, nampitondraina ny anarana hoe “Métiers du cinéma” sy ny “Genre court métrage”, teo ambany fiahian’ireo matihanina amin’ny sarimihetsika avy aty Madagasikara sy avy any Gabon ary avy any Burkina Faso.